« Salon de metiers… » : hahazo vahana ireo mpitady asa | NewsMada
« Salon de metiers… » : hahazo vahana ireo mpitady asa
Hisokatra anio etsy amin’ny Carlton Anosy ny « Salon de metiers et de la formation », karakarain’ny fikambanana Ny Ho avin’Tsika. Fotoana hifanenan’ny tolotr’asa amin’ireo tanora tonga eo amin’ny sehatry ny asa ity fotoana ity.
Maherin’ny zato ny tolotr’asa avy amin’ireo orinasa mpiara-miasa ho hita eny an-toerana. Ahitana sokajin’asa maro izany, toy ny fikirakirana ny informatika, ny sehatry ny fitsaboana, tontolo ambanivohitra….
Ankoatra izany, eo ny famelabelarana momba ireo karazan’asa, hataon’ireo efa tena matihanina. Anio maraina, hisy ny resaky ny tompon’andraikitra momba ny hoe « tanora mavitrika, fanoitry ny fampandrosoana ». Aorian’izany, handray anjara ihany koa ny sekretera jeneralin’ny Croix rouge malagasy hiresaka ny asa eo amin’ny fitsimbinana ny maha olona. Iarahana amin’ny orinasa eto an-tanàna misahana ny fandraharahana eo amin’ny tontolon’ny fiompiana izany. Eo koa ny resaka momba ny famatsiam-bola ny tetikasa mba hahomby.
LFR 2020: Feu vert de la HCC 15/07/2020
Covid-19: deux décès et 263 nouveaux cas 15/07/2020
Coronavirus – Assemblée nationale: 25 députés et membres du personnel touchés 15/07/2020
Centres de dépistage du coronavirus: de nouvelles dispositions pour les cas suspects 15/07/2020
Informations sur le Covid-19: les sources officielles, seules autorisées 15/07/2020